Hong Kong: Voahenjika Ho Nanala-baraka Ny Google · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2012 10:11 GMT
Albert Yeung Sau-shing, ilay lehiben'ny Vondron'ny Mpanjaka any Hong Kong dia manenjika ny Google Inc noho ny fanalàm-baraka. Nilaza izy fa rehefa nikaroka ny anarany, tamin'ny teny Sinoa sy Anglisy, nisy lisitranà valim-pikarohana izay nanala-baraka azy tao amin'ny pejy fikarohan'ny Google. Mangataka ny fitsarana izy hamoaka fampitandremana ny Google ny amin'ny fanohizany mizara ireo lahatsoratra manala-baraka ireo ary nangataka onitra ihany koa.
Araka ny tatitry ny gazety, nilaza ny mpisolovava ao an-toerana, Leung Wing Kin fa tsy afaka hametrahana fiampangana noho ny fanalam-baraka ny “milina mpizara” araka ny mahazatra. Na izany aza anefa, raha misy fitarainana napetraka tamin'ny mpanome tolotra ka tsy noraharahiany, misy vesatra mitatao ny amin'ny tsy maintsy handraisan'ilay orinasa tompon'ny milina fikarohana andraikitra araky ny lalàna noho ny fiampangana azy ho manala baraka.
Nanenjika vohikala maro ihany koa i Albert Yeung, isan'izany ny Golden Forum (Fevaworks), ny Encyclopedia of Virtual Communities (Wikia Inc.) ary ny Uncyclopedia noho ny fanalam-baraka tamin'ny Martsa 2011 izay nangatahany ny hamoahan'ireo Mpamatsy Votoatinà Lahatsoratra ny tena anaran'ireo mpanoratra sy ny hanatsaharan'izy ireo ny fanapariahana ireo lahatsoratra. Mbola mizotra izany fitsarana izany amin'izao fotoana izao.
Efa nanaisotra fara-faharatsiny lahatsoratra telo tafiditra tanatin'ny lisitr'ireo voalaza fa manala baraka tsy ho ao anatin'ny fikarohana ny Google Google (google.com.hk). Amin'izao fotoana izao rehefa mikaroka ny anarana Albert Yeung Sau Shing isika, misy fanamarihana mipoitra ao anatin'ny vokatry ny fikarohana:
Ho setrin'ny fangatahana araky ny lalàna, namafa valim-pikarohana telo izahay. Afaka mitsidika ny ChillingEffects.org ianao raha te-hahita valiny hafa mikasika io fanadihadiana io.
Voampanga ho nanana fifandraisana miafina “triad” i Albert Yeung ary nomelohina tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-70 ho “nametaveta ny lapam-pitsarana”, tamin'ny 1986 noho ny “filokana tsy ara-dalàna” ary tamin'ny 1998 noho ny “délit d'initié”. Manana fifandraisana akaiky dia akaiky amin'ny governemantan'ny tanibe Shina izy ary malaza noho ireo casinos-ny any Korea Avaratra.